Q-8aad taxanihii Adeegto – dhugasho
maxamedsheekafguun Oktoobar 2, 2020 sheekooyin
Q-8aad taxanihii Adeegto
Ninkii baa qabtay oo si qabow u yiri, “Walaal, waxba ha cabsan libaaxii cararyoo waadigaa arkayee, harraad ma ku hayaa, biyase ma rabtaa? Markuu intaa leeyahay waxay leefleefeysa biyihii horay madaxa looga shubay dardareerkoodii oo meelo afka u dhow marmaraya.
Iyadoo weli sidii ninkii u fuushan, sidii u yahay laantii caawa caymisay, bay, “haah, oo biyo waa rabaa” dheh istiri. Hadalki baase ka soo bixi waayey. Intay hadli lahayd bay madaxay ruxdo “haah’ tiri. Biyihii baa afka loo saaray. Qurquray labada dhaban qabsatay. Markaas way fadhidaa.
In cabbaar ah markay ka gow-gowsiineysay ayaa odaygii ka qabtay oo yiri. ka joojiya marka, mar kalaa la siin doonaaye, yay ku biyo-raboone.” Laga soo qabanayey maahee hunqaacay soo deysay aan biyihii madoobaaye ay cabbeysay la tarrixin.
Madaxa ayaa la qabtay. Nin ragga ka mid ah ayaa inta go’iisii sare biyo ku qooyey madaxa u saaray. Neef tuursidii ruux maratoon soo orday bay kala goyn weydey. Nin kale ayaa isana inta go’iisii sare iska soo xayuubiyey huwiyey si uu cawradeeda ugu asturo.
Intii meesha lajoogay baa qorraxdiiba soo baxday. Mar labaad baa biyihii la siiyey ka dib markii si fiican loogu luqluqay. Haddana markay cabbaar cabtay ayaa laga qabtay. Gabiday hoos u rogatay sidii iyadoo hunqaaco isku celineysa. Iyadoo go’ii la huwiyey isku dadeysa bay hoos isu eegtay markaasay garatay inay hore u qaawanayd.
Miyirkay miyirsatay darti bay xishood halkaa ka bilowday odaygii baa arkay inay ladnaatay markaasuu isagoon wax hadal ah oran inta awr soo fariisiyey saaray meelahay qabsan lahaydna tusay. Si qarsoodi ahee Maryan ayan garan ayuu raggii kale u yiri: ina mariya waxba hadda ha waydiinninee.”
Safarkii baa halkaa ka ganqabtay iyadoo awalba la watey Awr aad u dheereysa. Si siibasho ah ayaa loo socday. Qorraxdii ayaa soo kululaatay. Odaygii ayaa eegay Maryan oo si hurdo u hayso inay ratiga ka dhacdana u dhow. Awrkii ayuu joojiyey. lntuu jilibka u laabay buu ka dajiyey. Inay qof adadagee socon karta tahay markuu arkay buu in biyo ah intuu siiyey ku yiri, Hadda waad socon karaysaa bay ila tahay.”
Intay qosol xishood iyo naagnimo ku jirto hoos ula gabbatay wajigana dadabtay bay tiri: “Haa waa socon karaa maahee waa ordi karaa”.
Odaygii intuu gacanta qabtay buu dallad uu sitay hooskeedii wax ka wadaajiyey. Maryan markaa iyadaaba ka dheereyneysay baad mooddey dadka intiisa kale. Wax la sii dhadiiqeeyaba, qorraxdü baa harkii isku taagtay. Loogamase jimcine socodkii xalay baaqday baa in la kaabo la rabaa awrtana loo nixirnaayo wax saaran oo aan durfi ahayni ma jirin hadday rara gubyoon lahayd.
Markii qorraxdi dhankay ka soo baxday mooyee dhankii kale u foorarsatay milicdeeduna mid geeri ah tahay ayaa lays wada eegay. Inta geedo waaweyne meel cawr yar lehna ka dhow la eegtay baa reeryadii saarnayd inta laga tuuray la seetaseeteeyey. Geed harac ah, ayaa inta laysku kala tuuray waxaa la karsaday shaah. Shaaha ka hor waxaa laga sii laacay hilbo caata ahee la sitay (Solay).
Maryan qaybteeday ka qaadatay. Iyadaa shaaha karisay. Gallad bay iyada u ahayd. Niyaddeeda farxad ayaa buuxisay, waxayna is lahayd Magaalada ayaa tagi doontaa, iyadoo dheg ay ka maqashay mooyee aan weligeeba arag meel magaalo tahay iyo si looga nool yahay midna.
Raggii indhuu is wada geliyay, Maryanse farxad, raynrayn iyo niyaddeedoo wax is tustuseysay daraadeed ayaa hurdaba ka imaan weyday.
Maryan oo sidii u fadhida ilna aan is gelin ayaa odaygii indhaha kala qaaday. Haddiiba si bootini ku jirto intuu isu taagay buu Awrtii daymooday. Maryan baa iyana intay istaagtay tiri, “Ma soo dabaa Awrta’, Odaygii baa inta qoslay yiri, “Allow ha ku celin. Iska fadhi heedhe harkaaga anaa soo kaxaynayee… Horay intuu u sii dhaqaaqay, awrtiina haddiiba isku soo xiriirsaday raggii kaloo weli hurdana kor keenay buu qaylo hees rarmo oodda ka qaaday.
Raggii kalaa wada boodey awrtüna horay heeryada kaga boobay. Muddo saddex daqiiqo ka yar ayaa inta lagu bogay haddiiba horay loo bushin tuurtay, toobiyihii baa carraabo ahaan cagta loo saaray.
Odayga oo isagu diiddan in Maryan la waraysto maahee ragga kaloo dhallinyarada ahi aad bay u jecel yihiin in iyada la xog waraysto lana weydiiyo waxay tahay, meeshay ka timid, sidii bahalku ugu yimid amay geedka uga fuushay. Odaygu aad buu u hor taagnaa waraysigaas oo wuxuu is leeyahay iyaduu wax yeelayaa maadaama baqdintii weli ku jirto, qof yarna ay tahay. Hadday iyagu warsan lahaayeenna isagay ku ixtiraamayeen maadaama uu yiri “yaan intii mudda ah waxba la weydiin qoftaas.”
Awrta oo caddaysimo aan wax ka duwaneyn, iyadoo ahayd mid dheerayn iyo xoogba loo soo saantay, rag wada gaamuraye xoog lihina gar hayeen darteed ayay Maryan aad ugu adkaatay inay la qabsato. markii si looga go’aba orod bay hoosta ka xaddaa, Kucle ayay reerka kula socotay.